Company Profile - Qingdao Love Olona novana Fiarovana ny Tontolo Iainana Teknolojia Co., Ltd.
Karazana Business : mpanamboatra / Trade orinasa
Main vokatra: phosphating vahaolana, Degreasers & fanadiovana mpandraharaha, vy nanapaka tsiranoka, harafesina fisorohana menaka, ranon-javatra manohitra ny harafesina.
Isan'ny mpiasa : 20
Location: Shandong, Shina (Tanibe)
Factory Address: # 6 Weidesi Road, Liuting indostria Zone, Qingdao Shina
Qingdao Love Olona novana Fiarovana ny Tontolo Iainana Teknolojia Co., LTD. dia naorina tamin'ny taona 2015, ny teo alohany dia Qingdao kisary zavatra simika CO., LTD, naorina tamin'ny taona 2000, ankehitriny isika dia manana tantara nealy 20 taona.
Miaraka efa mandroso ny teknolojia, milamina tsara ny fampisehoana, ny antonony vidiny sy ny kalitao avo asa fanompoana, ny vokatra dia efa be mpampiasa ao amin'ny fiara, fiarovana orinasa, milina fitaovana mekanika, herinaratra sy ny orinasa.
Noho ny fampandrosoana ny orinasa tapaka, "hiarovana ny tontolo iainana, ny fandotoana fetra, soa mpanjifa" ny orinasa hevitra dia soritra eo amin 'ny mpiasa ny saina. Nanjary izahay am-polony vokatra mahomby fiarovana ny tontolo iainana. Ny kalitaon'ny faneva dia avo noho ny orinasa fitsipika sy ny orinasa faneva. Izany no mahatonga antsika hankafy ny varotra tsara rehetra manerana izao tontolo izao. Raha toa ianao ka liana na inona na inona ny vokatra na dia te-hiresaka momba ny fomba amam-panao mba, Aza misalasala mifandray aminay. Tsy miandry fatratra mamorona raharaham-barotra mahomby ny fifandraisana amin'ny mpanjifa vaovao manerana izao tontolo izao tsy ho ela. Ny orinasa nandalo ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 toetra rafi-taratasy fanamarinana.
vidin'ny nanapaka Oil , Aluminum firaka nanapaka Ranon-javatra, Aluminum Passivation, Fanapahana Ary Metalworking tsiranoka, Mild Alkaline Cleaner, Degreasing Agent Fa Metal ,